Calla, waa nidaam wadahadal fiidiyoow ah oo ka shaqeeya Jitsi laakiin taabasho gaar ah leh | Laga soo bilaabo Linux
Haddii aad raadineyso nidaam shirar fiidiyoow ah malaha Calla waxay kuu noqon kartaa xulasho aad u fiican adiga waana dhowr maalmood mashruuca lagu horumarinayo nidaamka shirarka maqalka iyo muuqaalka ah Jitsi Meet ayaa lagu dhawaaqay kaas oo u ogolaanaya kaqeybgalayaal dhowr ah inay hal mar wada hadlaan.
Guud ahaan, inta lagu jiro shirarka khadka tooska ah, kaliya hal kaqeybgale ayaa loo oggol yahay inuu hadlo, doodaha isla mar ahaantaana waa dhibaato.
1 Ku saabsan Calla
2 Isku day Calla
Ku saabsan Calla
Magaalada Calla, si loo abaabulo isgaarsiinta dabiici ah, oo ay dhowr qof ku hadli karaan isla waqti isku mid ah, Waxaa loo soo jeediyay in loo isticmaalo hagista qaab ciyaar door-ciyaar ah.
Muhiimadda habka la soo jeediyey waa mugga iyo jihada dhawaqa Waxaa loo aasaasay iyadoo loo eegayo booska iyo fogaanta kaqeybgalayaasha midba midka kale.
Dhanka bidix iyo midig u leexashada waxay badashaa booska isha codka istiraha, taasoo sahleysa kala saarida codadka iyo ka dhigida isgaarsiinta mid dabiici ah.
Kaqeybgalayaasha wada-hadalka waxay ku wareegayaan hareeraha garoonka ciyaarta waxayna halkaas kula kulmi karaan koox koox.
Wadahadal gaar ahaaneed, kaqeybgalayaal dhowr ah ayaa ka guuri kara kooxda weyn, oo ku biiritaanka dooda, waa ku filan tahay in loo dhawaado dadka badan ee ku sugan goobta ciyaarta.
Ikhtiyaarrada habayn debecsan ayaa la bixiyaa, kuu ogolaanaya inaad qeexdo kaararkaaga dalwaddii ah oo aad u habeysid naqshadeynta isdhexgalka si aad ugu haboonaato baahiyahaaga.
Sida oo kale Aamus Maaha nidaam shirar fiidiyoow cusub, laakiin waa maktabad weel loogu talagalay Jitsi Meet taasi waxay ku dareysaa takhasus maqal ah, si ay u awoodaan inay abuuraan qolalka shirarka ee muuqaalka ah iyo wixii ka sarreeya oo dhan si ay u siiyaan taabashada doorka gaarka ah
Calla wuxuu ku darayaa khariidad yar oo RPG ah aragtida dib u midoobida Jitsi. Waxay ku siineysaa avatar inaad ku dhex socoto qolka dhexdiisa oo dadka isticmaala ay doortaan meesha ay fariistaan ​​ee la xiriira isticmaaleyaasha kale.
Isku day Calla
Kuwa xiiseynaya inay awoodaan inay tijaabiyaan nidaamkan wada-hadalka fiidiyowga, waxay ku siin karaan isku day iyagoo tagaya websaydhka.
Halkan si fudud waa inay sameeyaan rikoor, halkaas oo ay u qoondeyn doonaan username oo la weydiin doono emaylkooda.
Intaa ka dib waxay awoodi doonaan inay doortaan qolka ay rabaan inay galaan iyo voila, taasna waxay awoodi doonaan inay isku dayaan Calla.
Hadda oo ku saabsan rakibidda nidaamka, xilligan suurtagal maaha tan iyo markii horumariyaha uu sameynayo dib u habeyn iyo wax ka beddel koodhka.
Laakiin sida ugu dhakhsaha badan tilmaamaha rakibaadda cusub ee la heli karo, waxay awoodi doonaan inay ku sameeyaan server-kooda.
Sidii horeba loogu sheegay bilowga, Calla wuxuu ka shaqeeyaa xarunta Jitisi, markaa waa inay leeyihiin xarun tan ama haddii aysan sidaas sameyn, waxay ku hormarin karaan howsha iyagoo raacaya tilmaamahan.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inay sameeyaan waas waxay leeyihiin gnupg2 oo rakibay oo rakibay Jitisi kana soo qaad kanaallada rasmiga ah ee aad wax u qaybiso.
Marka laga hadlayo Ubuntu, Debian iyo derivatives:
Intaa ka dib waa inaad isku hagaajisaa qaybta adeegga (ama haddii aadan ka shaqeyn doonin oo keliya hoosta IP-ga ee tan kaliya oo lagu talinayo in lagu qaabeeyo IP-gu taagan) oo loo habeeyo DNS-ka.
Si aan u qaabeyno DNS waa inaan qornaa:
Ka dib ku dar isla FQDN faylka / iwm / martida loo yahay, adoo ku xiraya cinwaanka loopback:
Xusuusin: xxxx waa cinwaanka guud ee IP-ga ee server-kaaga oo ay weheliso domainka la habeeyay, haddii aadan adeegsan domain, iska dhaaf IP-ga.
Hadda waxaan kaliya u baahanahay inaan ku darno bakhaarka Jitsi, marka laga hadlayo Ubuntu, Debian ama derivatives:
Ugu dambeyntii awood u yeelo dekedaha Jitsi, waxaad ku sameyn kartaa iyada oo loo yaqaan 'ufw firewall':
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato qaabeynta Jitsi, waad la tashan kartaa xiriirka soo socda.
Si aad uga feejignaato tilmaamaha cusub ee rakibidda Calla, waad awoodi kartaa halkan ka hubi.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Calla, waa nidaam wadahadal fiidiyoow ah oo ka shaqeeya Jitsi laakiin taabasho gaar ah leh